आयल निगमले किनेको जग्गा डुबानमा, भू–माफियासँग मिलेमतोको पुष्टि
काठमाडौं, २१ साउन / रुपन्देहीको भैरहवा–परासी सडकखण्डको रोहिणी नदी किनारमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न किनेको जग्गा डुबानमा परेको छ । बिहीबारदेखि लगातार परेको पानीले रोहिणी नदी उर्लिंदा निगमले किनेको बगर जग्गा डुबाएको हो । निगमले गत असारमा रुपन्देहीको साबिकका धकधई, पट्खौली र वसन्तपुर गाविसमा करिब १४ बिघा ७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,बिजनेस / अर्थ,मुख्य समाचार,समाज Read More »
बन्ने भए नेपाल–चीनबीच चार वटा नाकामा क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन
काठमाडौं, २० साउन/ चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो। विद्युत् आयात–निर्यातका लागि चीनसँग क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा चीन पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। यो खबर उमेश पौडेलले […]
पोखरा, १८ साउन। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिको आयोजनामा आज आयोजित बैठक एवम् स्थलगत अवलोकनका क्रममा चिनीयाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ को–अपरेशन लिमिटेडका एशिया प्यासिफिक डिभिजनका महाप्रबन्धक जेरी याङले सो कुरा जानकारी गराए । उनले ६० […]
सञ्चय कोषबाट तीन अर्ब कर्जा प्रवाह
साउन १७, विराटनगर । कर्मचारी सञ्चय कोष विराटनगरले आव २०७३÷७४ मा रू. तीन अर्ब १८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो कार्यालयले आव २०७२/७३ मा रू. दुई अर्ब ६५ करोड ऋण प्रवाह गरेको थियो । सो शाखाले आव २०७३/७४ मा २२ हजार ४ सय ९३ सञ्चयकर्तालाई रू. दुई अर्ब ५० करोड विशेष सापटी गरेको […]
काठमाडौं, १४ साउन / उपत्यका र पोखराका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र १५ दिनभित्रै २४ घन्टै खुला गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पर्यटकीय क्षेत्र रातभरि खुला राख्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र पोखराका पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ घन्टा खोल्न लागिएको हो । […]
ग्लोबल आईएमईको नयाँ हितग्राही खातासँगै निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना विमा
काठमाडौं, ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले आफ््नो ग्राहकलाई लक्षित गर्दैै नयाँ हितग्राही खातासँगै निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना विमा प्रदान गर्ने भएको छ । यस योजनाअन्तर्गत एक लाखको दुर्घटना विमा गरिनेछ । यो योजना २०७४ साउन ८ गतेदेखि लागू हुनेछ । उक्त सेवा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा कार्यालयमा खोलिने सम्पूर्ण हितग्राही खातामा लागू हुनेछ । […]
कुन बैंकले कति खुद नाफा कमाए ? (विवरणसहीत)
काठमाडौं, सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७३\_०७४ मा गरेको नाफा कमाईको बिवरण धमाधम पस्कने क्रम सुरु भएको छ । उनीहरुले अपरिस्कृत बित्तीय बिवरणहरु सार्वजनिक गर्दै गर्दा देशका मूख्य बाणिज्य बैंकहरुले कति खुद नाफा कमाए भन्ने चासो लगानीकर्तामा सर्बाधिक छ । उनीहरुको यही चासोलाई सम्बोधन गर्दै मेरो लगानी प्रस्तुत गर्दछ ( २८ बाणिज्य बैंकहरुले […]
भूकम्पपीडित पशुपालक कृषकलाई ५३ लाख अनुदान
पोखरा, १० साउन– जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०७३र ७४ मा भूकम्पपीडित पशुपालक कृषकलाई रु ५३ लाख अनुदान वितरण गरेको छ । भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त अनुदान पाउनेमा जिल्लाका २६८ जना कृषक भएको कार्यालयका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाख्राको खोर, गाईभैँसीको गोठ, कुखुराको खोर, उच्च प्रजनन बाख्रा, बोका थुमा […]
१ वर्षमा २९ ले पाए गुणस्तर चिन्ह
काठमाडौं– नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २९ वस्तुलाई गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गरेको छ । विभागबाट नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गर्ने प्रमुख कम्पनीमा नेपाल ग्यास, मनोज ग्यास, शालिमार स्टील, किसान पाइप उत्पादन प्रालि, इन्टरनेशनल सिमेन्ट, काठमाडौँ स्टील, ॐ गणपति इण्डट्रिज प्रालिलगायत छन् । विभागका प्रवक्ता रोमी मानन्धरले प्रक्रिया पु¥याएर ल्याइएका […]
भूकम्प पीडितले एकदिन पनि नचलाई ट्याक्सी बेचे
काठमाडौं, २ साउन/ भूकम्पपीडितलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि वितरण गरिएको ट्याक्सी भूकम्प पीडितले नै एकदिन पनि चलाएनन्। गोलाप्रथामा नाम परेका भूकम्प पीडितहरूले ट्याक्सी नम्बर पाएको एक घण्टामै बेचेर नाफा कमाएर गाउँ फर्किएका छन्। यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट ट्याक्सी नम्बर पाएको एकैछिनमा टयाक्सी बेचेर नामसारी गर्न कार्यालयमै फर्किने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ७, ८ […]